စကားကျယ်ကျယ်ပြောတတ်သူနားလေးသူများဟုဆိုနိုင်… – Trend.com.mm
Posted on May 11, 2019 May 6, 2019 by Shun Lei Phyo
ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အော်ကျယ်အော်ကျယ်စကားပြောရမှအားရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေရှိလား? တစ်ခါတစ်လေမှာ မှ စကားအသံကျယ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘယ်အချိန်ပဲစကားပြောပြောအသံပြဲံပြဲနဲ့ ပြောလိုက်ရမှ သူများကိုယ့်အသံကို ကြားရမယ် ထင်တဲ့သူတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက ဒီလိုအသံကျယ်ကျယ်စကားပြောတတ်သူတစ်ချို့ဟာ သူတို့အသံကိုသူတို့ကျယ်တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိတာပါပဲ။တစ်ခြားသူတွေက နင့်အသံကဟယ် ကျယ်လိုက်တာ…လို့ ပြောပင်မဲ့သတို့စိတ်ထဲမှာ ဒီအသံက အနေတော်ပဲ လို့ထင်နေတတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုတစ်ဖက်လူအတွက် ကိုယ့်အသံက ကျယ်လောင်နေပြီး ကိုယ်တိုင်က ဒီအသံလောက်ပြောမှ ကိုယ်ကြားရတာလည်းအဆင်ပြေသလို
ပြောရတာလည်းအားရပါတယ်လို့ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဒီလူက အာရုံကြောအားနည်းနေပြီး နားမကောင်းဖို့အစပျိုးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုနားကန်းသွားမှာလားဆိုတော့လည်း အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး…နားကန်းသွားတယ်ဆိုတာထက် အကြားအာရုံမှာ
ဒါကြောင့်အကြားအာရုံထိခိုက်ထားတဲ့သူ အကြားအာရုံ ချို့ယွင်းထားတဲ့သူ တော်တော်များများဟာ သူများထက်ပိုပြီးစကားပြောကျယ်ကာ ကိုယ့်အသံကို တော်ရုံ အကျယ်လောက်နဲ့ အားမရတတ်တာပါပဲ…ကိုယ့်အသံပြဲမှုကို ကိုယ်သတိမထားမိဘူးဆိုရင်တော့ နားကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပြီနော်…တစ်ချို့သောသူတွေက တော့အကြားအာရုံအကြီးကျယ်ချို့ယွင်းတာမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့ နားကြပ်ကိုအကျယ်ကြီးနားထောင်တတ်တာမျိုး ၊ ဖုန်းကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးအကြာကြီးပြောတတ်တာမျိုးတွေကြောင့်လည်း ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်…
ဘယျနရောရောကျရောကျအျောကယျြအျောကယျြစကားပွောရမှအားရတတျတဲ့သူမြိုးတှရှေိလား? တဈခါတဈလမှော မှ စကားအသံကယျြလာတာမြိုးမဟုတျပဲ ဘယျအခြိနျပဲစကားပွောပွောအသံပွဲံပွဲနဲ့ ပွောလိုကျရမှ သူမြားကိုယျ့အသံကို ကွားရမယျ ထငျတဲ့သူတှရှေိတတျကွပါတယျ။ထူးဆနျးတာ တဈခုက ဒီလိုအသံကယျြကယျြစကားပွောတတျသူတဈခြို့ဟာ သူတို့အသံကိုသူတို့ကယျြတယျဆိုတာ သတိမထားမိတာပါပဲ။တဈခွားသူတှကေ နငျ့အသံကဟယျ ကယျြလိုကျတာ…လို့ ပွောပငျမဲ့သတို့စိတျထဲမှာ ဒီအသံက အနတေျောပဲ လို့ထငျနတေတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုတဈဖကျလူအတှကျ ကိုယျ့အသံက ကယျြလောငျနပွေီး ကိုယျတိုငျက ဒီအသံလောကျပွောမှ ကိုယျကွားရတာလညျးအဆငျပွသေလိုပွောရတာလညျးအားရပါတယျလို့ ခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ ဒီလူက အာရုံကွောအားနညျးနပွေီး နားမကောငျးဖို့အစပြိုးနတောဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါဆိုနားကနျးသှားမှာလားဆိုတော့လညျး အဲ့လိုကွီးတော့မဟုတျပါဘူး…နားကနျးသှားတယျဆိုတာထကျ အကွားအာရုံမှာ ခြို့ယှငျးတဲ့သူလို့ပွောရငျပိုမှနျပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့အကွားအာရုံထိခိုကျထားတဲ့သူ အကွားအာရုံ ခြို့ယှငျးထားတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားဟာ သူမြားထကျပိုပွီးစကားပွောကယျြကာ ကိုယျ့အသံကို တျောရုံ အကယျြလောကျနဲ့ အားမရတတျတာပါပဲ…ကိုယျ့အသံပွဲမှုကို ကိုယျသတိမထားမိဘူးဆိုရငျတော့ နားကိုစဈဆေးကွညျ့ဖို့လိုပွီနျော…တဈခြို့သောသူတှကေ တော့အကွားအာရုံအကွီးကယျြခြို့ယှငျးတာမြိုးမဟုတျပငျမဲ့ နားကွပျကိုအကယျြကွီးနားထောငျတတျတာမြိုး ၊ ဖုနျးကိုနားနဲ့ကပျပွီးအကွာကွီးပွောတတျတာမြိုးတှေကွောငျ့လညျး ဒီလိုပွဿနာမြိုးဖွဈလာတတျပါတယျ…